Daawo Sawirada: Dowlada Federaalka oo sheegtay in Magaalada Muqdisho oo laga sifeeyay walxaha qarxa. – idalenews.com
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiwali Shiikh Axmed Maxamed, ayaa maanta magaalada Muqdisho kaga qaybgalay kulan lagu shaacinayey guul laga gaaray waxyaalaha qarxa oo laga sifeeyey magaalada Muqdisho.
Kulankan, ayaa waxaa Ra’iisul Wasaaraha ku weheliyey saraakiil ka socotay Midowga Yurub, hay’adda Qaramada Midoobey ugu qaabilsan la dagaalanka miinada ee UNMAS iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Cabdiwali, ayaa ku dhawaaqay warka ah in magaalada Muqdisho laga sifeeyey waxyaalaha qarxa. Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Cabdiwali ayaa gacan ka geysatay sidii loogu guuleysan lahaa hawshan caasimadda lagaga sifaynayey waxyaalaha qarxa.
Mudane Cabdiwali Shiikh Axmed, ayaa tilmaamay in waddanku uu ku soo jiray tobanaan sano oo nolol lagu waayey sabab ka dhalatay waxyaalaha qarxa, iyadoo magaalada Muqdishona ay ka mid ahayd meelaha ugu daran maadaaama ay ka dhacayeen dagaaladii ugu badnaa.
Ka sifaynta waxyaalaha qarxa ee magaalada Muqdisho ayaa u taagan libin muhiim ah, waxana ay muujinaysaa sida Soomaaliya ugu socoto dariiqa is-bedelka iyo horumarka.